Indlu yeGalari @ I-Eden elahlekileyo - I-Airbnb
Indlu yeGalari @ I-Eden elahlekileyo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMonique
Indlu yegalari yindlu esanda kulungiswa ngoo-1940. Uhlaziyo lwakutsha nje lubonelela ngengaphakathi langoku nelicocekileyo ngelixa ligcina iimpawu zexesha elinomtsalane lesakhiwo, iifestile ze-art deco leadlight kunye neerozi zesilingi. Utyunjwe ngesitayela kunye nomzobo we-original kwiindonga, inqanaba elongezelelweyo lokuthuthuzela liya kwenza ukuba ufune ukuhlala. Indlu imiswe ngasemva kweGalari yobuGcisa yase-Eden elahlekileyo kunye negadi enempelaveki iGarden Idla iveni yokutya enika ukutya okunempilo kunye nomoya opholileyo.
Igalari yeNdlu iDwellingup yindlu yeebhedi ezi-3 zokuhlambela ezi-2. Kukho umlilo weplanga owakhelwe ngaphakathi ukuze upholile de kusebusika. Ikhitshi entsha kunye nezixhobo zombane. Igumbi elikhulu elibanzi lelanga elijonge kwiyadi yangasemva apho kukho umgangatho wamaplanga we-BBQs ehlotyeni kunye negumbi lomlilo lomlilo wasebusika. Igalari yeNdlu iyafikeleleka kubasebenzisi bezitulo ezinamavili. Nceda ubuze malunga neemfuno zakho zokufikeleleka.
Igalari edibeneyo kunye negadi, kunye neveni yayo entle yamaplanga; IGarden Eats @ I-Eden elahlekileyo ibonelela ngokutya okunempilo okusekwe kwisityalo kwindawo ephilileyo kodwa ikhululekile.
Unokujonga ezinye iifoto zegalari kunye neGarden Eats kwi-FB okanye kwi-Insta
I-Dwellingup yidolophu encinci entle kwihlathi lejarrah kumazantsi ntshona eOstreliya. Yindawo ethandwayo yokusingwa kwimisebenzi emininzi yangaphandle, ejikelezwe kukunyuka intaba kunye neendlela zokuhamba ibhayisekile, kwaye kuphela i-9km ukusuka eLane Poole Reserve, indawo ekhuselweyo yentlango ebandakanya uMlambo iMurray, ilungele ukuqubha, ipikniki kunye nohambo oluthambileyo lwephenyane okanye olona lonwabo ngakumbi. I-kayak adventure iqhubela phambili ezantsi xa iimvula zasebusika zizisa amanzi amhlophe.
Edolophini uya kufumana iivenkile kunye neekhefi, iHotele yembali yaseDwellingup kunye nololiwe wabakhenkethi baseHotham Valley. I-Dwellingup yindawo yokukhwela ibhayisekile yeentaba kunye nokwakhiwa kweendlela ezintsha zokuhla kunye nokunqumla ilizwe lebhayisekile yeentaba ezibeka kakuhle kwindlela eya ekubeni yidolophu yeendlela ezibalulekileyo kumazwe ngamazwe.
Ukuba ufuna ukuphumla kwaye ukonwabele ukuba kufutshane nendalo ke i-Dwellingup inayo yonke kwaye uya kuba neGalari yeNdlu njengesiseko sakho sokwenza kancinci okanye kangangoko uthanda.
Sihlala ezantsi kwendlela, kwaye siyafumaneka ukuba siqhagamshelwe nanini na.